Autoradio maka VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA Klyde Autoradio a maka VECTRA ANTARA na-akwado asụsụ dị iche iche, ihe ruru 70 asụsụ obodo. Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 OS nwere 4GB Ram, Octa-Core & 32GB ROM. You nwere ike megharịa akwụkwọ ekwentị site na ekwentị gị na Autoradio maka VECTRA ANTARA wee mee ka...
Klyde PX5 gam akporo 9.0 Universal Autoradio Nke a Android 9.0 Universal Autoradio na-agba ọsọ ọsọ, dị nro ma dịkwa ogologo karịa, nke sistemụ arụmọrụ gam akporo 9.0 na-arụ ọrụ ya na octa-core CPU processor, ọ ga-ewe 1 sekọnd iji rụzie ọrụ mgbe arụnyere. 6686 redio IC na-eme ka arụmọrụ ya dị mma na nnabata AM / FM /...
android radio okpukpu abụọ maka Mondeo S-max Igwe oku gam akporo Klyde android nke abụọ maka Mondeo wuru na modem WiFi, ọ na-abịa na antenna WiFi maka ịnabata akara ngosi ka mma, ị nwekwara ike ịnweta ịntanetị na 3G dongle. Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 OS nwere 4GB Ram, Octa-Core & 32GB ROM. Nwere ike megharịa...
okpukpu abụọ Din Android 9.0 Car Stereo maka A4 Ugboro abụọ a Din Android 9.0 maka A4 na-agba ọsọ ọsọ, dị nro karịa ma na-abawanye ogologo, nke sistemu arụmọrụ gam akporo 9.0 na-arụ ọrụ na octa-core CPU processor, ọ ga-ewe naanị 1 nke abụọ iji rụchaa ngwa ngwa. 6686 redio IC na-eme ka arụmọrụ ya dị mma na nnabata AM /...
Sistemụ Klyde gam akporo Infotainment Car Carre maka A3 DVD DVD 9.0 nke a maka A3 nwere ọdụ ụgbọ USB maka ntinye igwefoto. Agụnyere igwefoto. Klyde Android 9.0 Car DVD nke A3 kwadoro site na onye nrụpụta Octa-Core iji wetara gị mmeghachi omume ọsọ ọsọ na njikọta na-agbanwe agbanwe maka iyi nke akụkọ redio na akụkọ ihu...
Autoradio gam akporo 9.0 maka E-Class W211 G-Class w463 Autoradio gam akporo 9.0 maka E-Class W211 na-agba ọsọ ọsọ, dịkwa nro ma na-akwado sistemụ arụmọrụ gam akporo 9.0 na octa-core CPU processor, ọ ga - ewe 1 sekọnd iji bido mgbe nrụnye. 6686 redio IC na-eme ka arụmọrụ ya dị mma na nnabata AM / FM / RDS ka mma, yana...
Android 9.0 Autoradio maka Passat Polo Jetta Ihe gam akporo 9.0 Autoradio a maka Passat ya na Klyde DAB + antenna antenna, inwere ike kari karia ihe dijitalu kachasi nma gi Android 9.0 Autoradio maka asụsụ nkwado Passat, ihe ruru asụsụ 70 nke obodo. Direct tụgharịa ọrụ WIFI ịchọ ma jikọọ na ebe ọ bụla WIFI hotspots.Ọ...
Android 9.0 Car Stereo maka Magotan Passat Tiguan Ihe a Klyde Android Car Stereo maka Magotan kwadoro site na onye nrụpụta Octa-Core iji wetara gị mmeghachi omume ọsọ ọsọ na njikọta na-agbanwe agbanwe maka iyi nke akụkọ redio na akụkọ ihu igwe, egwu egwu na-egwu, yana APPs na-agba ọsọ. Stereo Android a maka Magotan...
Klyde gam akporo 9.0 Car Radio maka Vito Viano A-W169 B-W245 Igwefoto 9.0 Car gam akporo nke A-W169 wuru na TDA7851L njuputa IC, na-akwado mmeputa olu nke subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. Mmepụta ọdịyo Max: 4 X 50W, Android 9.0 Car Radio maka A-W169 na-akwado RCA ụdị ntinye igwefoto tụgharịrị, na-akpaghị aka...
Sistemụ Ntanetị Ihe Ntugharị Ududo abụọ na gam akporo 9.0 Nke a Double Din Universal Infotainment System na-akwado ụdị ngwa-ngwa. Emechara nrụnye a, igwe a chọrọ ihe dịka sekọnd 1 iji kwụsịchaa oge nke abụọ. (Igwe ndị ọzọ na-ewere sekọnd iri atọ) Ngwaọrụ a nke Klyde Double Din Universal Infotainment kwadoro site na...
Klyde Autoradio gam akporo 9.0 maka Lekwasị Mondeo S-max Klyde Autoradio gam akporo 9.0 maka Lekwasị Mondeo S-max na-akwado site na onye nrụpụta Octa-Core iji wetara gị mmeghachi omume ọsọ ọsọ na njikọta na-agbanwe agbanwe maka iyi nke akụkọ redio na akụkọ ihu igwe, egwu na-egwu egwu, yana APPs na-agba ọsọ. Kacha...
Klyde Excelle GT XT gam akporo 9.0 Autoradio Enwere ike ịtọlite ​​agba dị n'azụ, ọ nwere ike igosipụta dịka mmasị onye ọrụ si chọọ. Nke a Excelle GT XT gam akporo Autoradio nwere onye na-anabata redio redio DAB, inwere ike ịnụkwu redio redio ọdịyo dijitalụ kachasị amasị gị na ụda CD dị ka mma. (Mara: Klyde DAB +...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Kompas 2014-2015 1 ) stereo ụgbọ ala maka Kompas 2014-2015 Na-akwado GPS Nsoro, bute tupu Google map (na-enweghị data eserese na-anọghị ya), Nsonaazụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na isi oche, ọ na - egwu vidiyo site na kaadị USB / SD, ma ọ bụ vidiyo Youtube Youtube...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Wrangler 1 ) stereo ụgbọ ala maka Wrangler wuru na TDA7851 njupụta IC, Na-akwado nrụpụta ọdịyo subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. Mkpebi ihuenyo: 1024 * 600, Nkwado 4K ( 3840 × 2160 pikselụ ) / vidiyo 1080P HD, na-akwado ọrụ njikọ enyo, can nwere ike iji GPS ekwentị gị na ntanetị iji...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Insigina 2009-2012 1) Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 sistemụ, ngwụcha ngwụcha Rockchip nke 4GB Ram, Octa Core & 32GB ROM, ọsọ ọsọ na-agba agba ọsọ ọsọ maka ngwa ndị na-agba ọsọ. 2) stereo ụgbọ ala maka Insigina 2009-2012 na- akwado Nsoro GPS, buru ụzọ wụnye Google map (na-enweghị data...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Astra J 2011-2014 Android 9.0 kachasị ọhụrụ, ị ga-enweta sistemụ arụmọrụ dị iche. A53 octa isi processor, melite ọsọ nzaghachi, igodo, egwu, vidiyo, ọsọ na-acha anụnụ anụnụ na-agba ọsọ 100%. Akụkụ Isi: 1) Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 sistemụ, ngwụcha ngwụcha Rockchip nke 4GB Ram, Octa...
Ihu igwe onyonyo ọkpụkpọ igwe onyonyo onyonyo 9.0 maka ekwenti 2019 1. Uzo eji eme ugbo ala gam akporo 9.0 maka achoro ihe nleba anya 2019 - - Ndi mmadu gha eme ihe: 7dynamic backgrouds di. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere. 2. Nkọwapụta nke uzo gam akporo gam akporo nke 9.0 maka achoghi 2019 Pixel ihuenyo:...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Astra J 2015-2017 1) Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 achịcha usoro, Rockchip processor nke nwere njedebe dị 4GB Ram, Octa Core & 32GB ROM, ngwa ngwa ngwa ngwa ọhụụ na-agba ọsọ maka ngwa ndị na-agba ọsọ. 2) redio ụgbọ ala maka Astra J 2015-2017 na- akwado Nsoro GPS, buru ụzọ wụnye Google...
Ihu igwe mkparịta ụka igwe onyonyo onyonyo 9.0 nke Uno 2014-2017 1. Ulo mkpado ala gam akporo 9.0 maka ihe nlere Uno 2014-2017 - -Akwadoro ndi mmadu siri ike: 7dynamic backgrouds di. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere. 2. Nkọwapụta nke igwe anaghị aga gam akporo 9.0 maka ịmegharị 2014-2017 Pixel ihuenyo: 1024...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka ASTRA K 2016-2017 1.Ọ dị ọnụ ahịa na iji eserese ọnlaịnụ na-akwụghị ụgwọ: can nwere ike ibudata maapụ dị iche iche dị n'ịntanetị dị ka maapụ Google, IGO, Sygic na Waze maka n'efu. can nwere ike ịnweta ụzọ ziri ezi na nke kachasị ọhụrụ, data okporo ụzọ ndụ. na ndị ọzọ. Igwe redio...
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka MOKKA 2017 1.1024 * 600 HD Digital Screen. Ihu Igwe Capacitive ihu ise. 2.car redio maka MOKKA 2017 Nkwado Media Card / GPS Kaadị / 2 USB Stick nchekwa, ruo 4 * 32GB. 3.DIYị Ngosipụta NchNhr: can nwere ike ịdọrọ akara ngosi niile. Ọrụ ọhụrụ: Bulit na Apple Carplay (Ọrụ Nhọrọ) CarPlay bụ...
vidiyo ụgbọ ala maka CERATO / FORTE 2018  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe olu ugbo elu nke 2din maka IX45 Santa Fe  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu elektrọn ụgbọ ala gam akporo 8.0 maka Qashqai AT 2013-2016 na Bluetooth DSP Parrot  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala igwe onyonyo dvd maka Elantra 2016  Kpọtụrụ ugbu a
Android 9.0 stereo ụgbọ ala maka Sportage 2018-2019  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe eji egwu dvd gam akporo 8.0 maka CIVIC 2016-2017 ya na blu Bluetooth  Kpọtụrụ ugbu a
2016 Elantra android 8.0 ọtụtụ egwuregwu  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala maka Sportage 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Ndi egwuregwu DVD DVD maka MAZDA 6 Atenza 2017  Kpọtụrụ ugbu a
Android 9 2din ọdịyo ụgbọ ala maka IX25 2014-2015  Kpọtụrụ ugbu a
9 inch ụgbọ ala dvd maka MALIBU2017-2018  Kpọtụrụ ugbu a